Koofiyadda ugu sarreysa ee uu leeyahay Adolf Hitler oo lagu iibisaday 50 kun oo euro. – Wakaaladda Wararka Soomaaliyeed
Koofiyadda ugu sarreysa ee uu leeyahay Adolf Hitler oo lagu iibisaday 50 kun oo euro.
By kullane / November 21, 2019 November 21, 2019
Xusuustii Nazi, oo ay ku jirtay koofiyadda ugu sarreysa ee Adolf Hitler, ayaa boqolaal kun oo Euro ah lagu iibsaay, iyado ay jiraan isugu soo baxay ka dhacay magaalada Munich Arbacadii xilli ay socdaan mudaaharaadyada Jarmalka iyo kuwa caalamiga ah.
Koofiyaddii ugu sarreysey hoggaamiyaha Nazi ayaa lagu iibiyey 50,000 oo euro sida laga soo xigtay bogga internetka ee xaraashka iibka ee
'Hermann Historica', halka alaab ka mid ah lammaanaheeda Eva Braun uu mid walba la iibiyay kumanaan.
Hal iibsade ayaa ku bixisay € 130,000 nuqul ka mid ah koob gacmeedkii Hitler ee maahmaahdii siyaasadeed ee naceybka ahayd ee Mein Kampf, kaas oo mar iska lahaa sarkaal sare Nazi Hermann Goering, oo lagu galiyay gorgorka iyo astaanta swastika ee xisbiga.
Dhar kale iyo waxyaabo badan oo shakhsiyaad ah oo ka yimid dagaalkii caanka ahaa ee Dagaalkii Labaad ee adduunka ee Hogaamiya Naasiyiinta sida Heinrich Himmler iyo Rudolf Hess ayaa iyaguna xirmay bogagga buugyaraha.
"Dembiyada Naasiyiinta halkan ayaa lagu maleegayaa," ayuu yiri wakiilka la dagaallanka cunsuriyadda ee dawladda Jarmalka Felix Klein oo la hadlay wargayska Funke.
Waxaa kaloo uu yiri, “waxay u dhaqmayaan sidii inay ka ganacsanayaan alaab farshaxanimo oo caadi ah", isaga oo intaas ku daray in ay jirto khatar ah in milkiilayaasha Naasiyiinta ay noqdaan ashyaa'da caqiidada .
Ka hor xaraashka, Gudoomiyaha ururka yuhuudda yurub Rabbi Menachem Margolin wuxuu xasuustaa in ay tahay Jarmalka hogaaminta qaarada Yurub tirada ugu badan ee dhacdooyinka nacaybka la sheegay, isagoo arrintaasi ka hadlaya ayaa yiri:-"Waxaan ka codsaneynaa mas'uuliyiinta Jarmalka inay ku qasbaan guryaha xaraashka inay faafiyaan magacyada kuwa wax iibsanaya," ayuu yidhi, isagoo leh waa in lagu daro liiska 'daawashada' ee dowladda”.
Alaab badan oo ay lahaayeen saraakiishii sarsare ee Nazi ayaa waxaa qabtay askarta Mareykanka maalmihii ugu dambeeyay Dagaalkii Labaad ee Adduunka, waxaana ka mid ahaa Dharka uu lahaa Braun, Hitler oo ay wada wadeen muddo dheer oo ahaa xaaskiisa muddo yar ka hor dhimashadiisa, ayaa laga dhex helay 40 dogob oo ay ciidamada Mareykanku qabteen bishii May 1945-kii magaalada Salzburg ee dalka Austria.
Qaar badan oo ka mid ah kuwa aan caadiga aheyn ayaa waxaa ka mid ah nuqul heshiiskii kirada ee Hitler ee Munich iyo labo muraayadaha indhaha ah oo uu xirnaa eedaysanaha maxkamada dambiyada dagaalka ee Nuremberg, si looga fogaado dhalaalka daadadka.
Waxaa diyaaryay C/laahi Ruush
Madaxweyne Waare oo tababar u furay dufcadii sedexaad ee Ciidanka Boliiska Hirshabelle
Shirka G/Banaadir oo looga hadlay u diyaar garowga ciyaarta Finaalka ee degmooyinka